SomaliNet Magazine: NOFEEMBER 2002
ARIMAHA BULSHADA - GABADHU WAA RAJO WANAAGSAN, WAANA DHAAWAC XANUUN BADAN
Qaybtii 2aad - Wanaaga gabadha waa waxa ugu muhiimsan oo ay bulshada ku wanaagsanaan karto, gabadh yahay kac oo mar waliba foojignow, walaalay ma xasuusataa maalintaad joogtay waddankaagii magaaladaadii iyo tuuladaadii ama xaafaddii aad deganaydeen oo aad kula ciyaari jirtay carruurtii xaafadda, ma
DHAQANKA - DHAQANKA QABIILKA EE XOOLO-DHAQATADA SOOMAALIYEED
Dhaqanka qabiilka ee nolosha xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed waa mid ka duwan midka magaalada ka jira ee nasakhan oo ay hoggaaminayso maslaxadda shakhsiyadeed, kana midka noqday manhajka siyaasadeed odeyaasha reer magaalka ah ee u ooman xukunka. Dhaqanka baadiyaha. Qabiilku wuxuu leeyahay saldhig adag
DIINTA - 70KA DANBI EE UGU WAAWEYN (AL-KABAA’IR)
Danbiga 13aad: Xoolaha agoonta oo si xaqdarro ah loo cuno
Ilamaha yar markii waalidkood dhinto waxa ay u baahan yihiin qof daryeela. Ilaahay ayaa inoo ka digay in aan agoonta ku xadgudubno oo aan xoolahooda si xaqdarro ah u cunno. Ilaahay wuxuu inoo sheegay in ciddii si xaqdarro ah u cunt
DIINTA: SU’AALIHII IYO JAWAABIHII BISHAAN
1) Su?aal: walaal waan idin salaamay. waxaan rabaa in aan su?aal idin waydiiyo ee jawaab fiicaan I siiya. waxaan somalinetka ka akhristay in ay qofka zinaysto dambi weyn tahay taasna waan ogahay laakiin ma laga towba keeni karaa? haddii dhowr mar la sameeyay oo mar walba lays yiri iska
Hawsha oo ku badatay awgeed marnaba Mulac ma xasuusan Ahmed aabihii iyo Ahmedba, intii ay haddaba dhexda ku soo jireen ayuu waydiiyay Daahir bal in uu war ka- hayo Ahmed yare iyo aabihii, Daahir ayaa ku jawaabay maya adeer saaka ayaan ka soo tagay gurigii kumana noqon mar kale. Waxay soo socdaanba
Waxaan ahay wiil somaliyed dadaydu waa 35jir waxaan deganahay dalka maraykanka waxaan is jecelahay gabar aan is jeclayn mudo 20 sano ah runtii aad baan u jeclahay iyaduna aad bay ii jeceshahay waana gabar aanu meel ku wada kornay,hadaba dhibaatada na haysata ayaa ah ani
ARIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH-QABIIL BAA DUMIYEY QOYSKEYGA
Balse aniga shaqsi ahaan weli kuma fekerin gabadhaas inaan sheeko wadaag noqono waan ogahay iney tahay gabar tan ugu wanaagsan leh muuqaal qurxoon oo ku soo jiidanaya nin walibaana uu ku hamiyo inuu guursado,laakiin aniga kama helin gabadhaas, qof walibaana dooq buu leeyahay dooqeygiina a
RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN - MAXAAD KA TAQAAN NINKA FAALALOWGA AH EE BERYAHAN SIDA AADKA AH LOO HADAL H
Xagaagii 1939kii markuu Adolf Hitler dagaalka ba\_'an ka waday dunida, ayaa wasiirkiisii Borobogaandadu ( Joseph Goebb) wuxuu soo gudbiyey in soo bixitaanka Hitler la saadaaliyey 400 oo sano ka hor. Wuxuu soo bandhigay qoraalkii yaabka lahaa ee uu qoray Ninkii farans
SUAA\_'LIHII UGU YAABKA BADNAA EE LA WAYDIIYO SHIIKH CABDALLA AL NUURI IYO JAWAABAHOODII
Qaybihii hore waxaan la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddibna markii ay arkeen in uu madow yahay (una ekayn aabihiis iyo hooyadiis midna) ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay odayga 60 jirka ah, kaddibna diid
TAARIIKH: DAGAALKII SOOMAALIYA & ETHIOPIA (1977) - DHAQDHAQAAQYADII DIBLOMAASIYADDA
Bilowgii sanadkii 1977-kii, madaxweynihii Soomaaliya Maxamad Siyaad Barre, socdaal dheer ayuu ku kala bixiyay dalal Carbeed oo ay kamid ahaayeen Boqortooyada Sacuudiga, Kuweyt, Imaaraatka Carabta iyo Suudaan. Dalka Suudaan, madaxwaynhu wuxuu ku dhaafay wasiirkiisii
ARRIMAHA BULSHADA - U ROONOOW WAALIDKAA RABI HAKAA RAALLI NOQDEE
Waxaan dhanbaalkaygan u dirayaa hooyo iyo aabo walba, iyo ubad kastoo baarri u ah una jajaban labadiisa waalid, Ilaahay khayr badan ha siiyee kuligood. Labadan qof ee ah labada qof ee aduunkan ugu qiimaha badan, ugu sharaf iyo qadarin mudan, labadii qof e
BARNAAMIJKA XIDDIGAHA - YUUSUF MAXAMED MAXAMUUD ( Y/SHAQAAQ)
Marka laga hadlayo xiddigaha Isboortiga noocyadiisa kala duwan , waxaa durbadiiba dib u soo xusuusanaysaa waayihii nabadda iyo halyeeyadii caanka ku ahaa ciyaaraha dalkeena Soomaaliya sida: kubbadda cagta, Kubbadda Koleyga, Ciyaaraha fudud,Teeniska I.W.M. Xu
GABAY - KOOFIL
Adaa Koofilow jiitayaan dunida joogayne
Adigaa jidkii lagugu wadi jimic la\_'aaneede
Jahannama la geeyow haddaad aakhiruu jahato
Nimankii jannow kacay war bay
Sida Eebbahay kuu jirrabay mari jawaabteeda<
FANKA IYO SUGAANTA - SHEEKO TAXANE AH: KULANKII BARAKAYSNAA
Cudurdaarasho: Waxaan akhristayaasha qiimaha leh la socodsiinaynaa in ayan bishaan noo suurto galin in aan sheekadii taxanaha ahayd soo gudbino bishan.
Waxaan insha allahu ku talo jirnaa inaan bisha soo socota soo gudbino.